NgokukaKuo, iiglasi zeNqobo eziNgcono ziya kusebenzisa itshaja efanayo ne-14 "MacBook Pro | Ndisuka kwiMac
NgokukaKuo, iiglasi zeNqobo ezingeyonyani ziya kusebenzisa itshaja efanayo ne-14 ″ MacBook Pro.
Siyaqhubeka namahemuhemu malunga nokusungulwa okunokwenzeka kulo nyaka kweeglasi zokwenyani zokwenyani nguApple. Ezi glasi sele zikhutshiwe ezinye ii-rums zokuba zinokuba njani, ngoku kuthiwa zinokusebenzisa itshaja efanayo esetyenziswa kwiMacBook Pro. Itshaja ye-96W efanayo.
UMing-Chi Kuo uyaqhubeka nokukhupha ulwazi kunye / okanye amarhe malunga nokuba iiglasi zenyani zenyani zeApple ziya kujongeka njani. Kulindeleke ukuba ibonise a indibaniselwano yenyani eyandisiweyo kunye neempawu zokwenyani zokwenyani. Kukwalindeleke ukuba umsebenzisi abeke isixhobo kwaye anganxibelelana naso ngokusebenzisa iziboniso ze-OLED eziphezulu kakhulu. Xa ziqhubeka, iimeko ezisingqongileyo ezinokunikezelwa.
Yonke le teknoloji yenza ibhetri ibe nentsingiselo ekhethekileyo kwaye ithatha ukubaluleka okukhulu. Uthathela ingqalelo inkcitho ekufuneka iyenze, kubalulekile ukuba zinokubizwa ngokukhawuleza kwaye ibhetri ingahlala ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Okwesibini yeyona nto inzima ukuyisombulula ukusukela oko ibhetri eninzi, ubunzima kwiiglasi Kwaye oko kuthetha ukuba asinakuba neeseti ezifanayo ixesha elide. Ngokuphathelele inkqubo yokutshaja, yile nto uKuo agxile kuyo ngoku.
Umhlalutyi uthi iiglasi zokwenyani zokwenyani baya kusebenzisa itshaja efanayo ne-14-intshi yeMacBook Pro. Oko kukuthi, itshaja ye-96 watt. Isenokungabi yiyo yodwa into efana neMac.Kusenokwenzeka ukuba nabo banayo iM1 chip nangona kuvakala ukuba inokusebenzisa iNeural Engine ekhawulezayo ukuze ikwazi ukuhlalutya imifanekiso ngokukhawuleza kunasemva kwayo yonke into. injongo.
Kuya kufuneka silinde ixesha elide Kwaye ukuba amahemuhemu ayazaliseka, kuya kuba ekupheleni kwalo nyaka xa sibona uTim Cook ebonisa enye into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » NgokukaKuo, iiglasi zeNqobo ezingeyonyani ziya kusebenzisa itshaja efanayo ne-14 ″ MacBook Pro.
IBeats Fit Pro iza kusungulwa eYurophu naseCanada nge-24 kaJanuwari
UGurman akanathemba malunga nenzwa yobushushu yeApple Watch Series 8